မေလ ၁ရက်နေ့ အလုပ်သမားနေ့မှာ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ FBSမှ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်!
ချစ်မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား! ၂၀၁၇ခုနှစ် မေဒေးမှာ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်။ အားလုံး အားလုံးပဲ ရှေ့လာမယ့် နေ့သစ်တွေတိုင်းကို ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းကာ ကံကောင်းခြင်းတွေ၊ အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကာ အောင်မြင်တဲ့ ဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ!
မေလတစ်ရက်နေ့ အလုပ်သမားနေ့ အားလပ်ရက်ဆိုတာ မိမိတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကို မိမိတို့ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကို ပြန်ပြောင်း သတိရစေမယ့် သမိုင်းဝင် နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ မေဒေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပြီး မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်တွေ အပြည့်နဲ့၊ စိတ်ကူးကောင်း အကြံကောင်းများလဲ ရရှိပြီး ဘ၀ခွန်အားတွေ ရရှိကြပါစေ။
ထို့ကြောင့် မေဒေး အားလပ်ရက်မှာ အနားယူပြီး ရှေ့ဆက်မယ့် ဘ၀ခရီးအတွက် အားသစ်ခွန်သစ်တွေ မွေးမြူလိုက်ပါ!